Weebly: Ukusingathwa Kwendawo Elula Ngokuphawulekayo ne-CMS | Martech Zone
NgoLwesithathu, ngoMashi 31, 2010 NgoMgqibelo, Juni 27, 2015 Douglas Karr
Lapho umngani wami uJenni engitshela ukuthi umngane wakhe bobabili ukhulume naye ukuthi aqale iwebhusayithi Weebly, insiza yokubamba mahhala kanye nohlelo lokuphathwa kokuqukethwe (i-CMS), ngamnikeza isikhathi esinzima impela. Ngivele ngazi ukuthi ngizophela ukusebenza ubusuku bonke ukuze ngisebenzise isiza esihle esenzelwe yena yi-Right On Inbox, a i-ejensi yokukhipha i-imeyili.
Okuhlangenwe nakho noWeebly bekuphambene impela! Ngikwazile ukukopisha nokunamathisela i-HTML ne-CSS, ngisebenzisa izintambo ezilula zokufaka esikhundleni se-Weebly (ngokwesibonelo, okuqukethwe kubekwe nge- %% CONTENT %%), futhi ngilayishe amafayela ngokusebenzisa isikhombimsebenzisi esibonakalayo somsebenzisi esilula.
Ukuhlelwa kokuqukethwe kuyi- Hlela Endaweni isitayela - into okufanele isetshenziswe yilo lonke uhlelo lokuphathwa kokuqukethwe. Okusho ukuthi, ikuvumela ukuthi uhlele kumongo wekhasi ukuze ubone ukuthi libukeka kanjani. Akunasidingo sokubuka kuqala noma uye emuva naphambili ngokuhlelwa. Umlayishi wesithombe wabeka izithombe ezihlobene nesayithi futhi wagcina amagama afanayo wesithombe, ngakho-ke angizange ngidinge nokwenza okunye ukuhlela.
Umphumela uyamangalisa. Ngikwazile ukwakha isiza esakhiwe ngobungcweti ngemizuzu engama-30 noma ngaphezulu. Ngihlabeke umxhwele impela! Futhi ngokukhethwa okukhulu kwezindikimba, amafomu, imidiya eshumekiwe nezinketho zokuqukethwe, akudingeki ube yingcweti yokwakha iwebhusayithi yakho. Kukhona nama-akhawunti we-pro atholakalayo ngezinye izinketho ezingeziwe (nokususa isixhumanisi sonyawo lwe-Weebly).
Sibheke Isibukeli se-Indy bese ubhalisela i-newsletter yabo!
Tags: indy isibukelisibindekile
Ngo-Apr 1, i-2010 ku-7: 35 AM
Isayithi libukeka limangalisa! Angikaze ngazi ukuthi uWeebly wayekwazi ukuthola imiphumela enjalo ebukekayo… yize, angikaze ngiphambuke ngaphesheya kwezifanekiso ezinikeziwe.
Ngo-Apr 1, i-2010 ku-8: 02 AM
Ngiyajabula ukukunikeza ifolishi lebhulogi ngokuntuleka kwami ​​kwamakhono obuchwepheshe! Ngiyabonga futhi ngosizo lwakho!
Ngo-Apr 1, i-2010 ku-7: i-21 PM
Ngiyajabula ukuzwa u-Weebly ekusebenzele kahle! Singajabula kakhulu ukuzwa noma iyiphi impendulo onayo.
Sep 28, 2011 ku-9: 31 AM
ingabe ikhona indlela yokushintsha phakathi kwekhodi nokuklanywa kwezinto ezisivele zibekwe ekhasini?
Sep 28, 2011 ngo-3: 24 PM
Yebo, banokuhlela okuhle okulula kokusebenza kwendawo. Akuyona into eyinkimbinkimbi kakhulu, kodwa kuhle kakhulu kusayithi eliyisisekelo.